झलनाथकै पालामा एमसिसीका लागि निवेदन हालिएको हो : कांग्रेस प्रवक्त्ता « AayoMail
झलनाथकै पालामा एमसिसीका लागि निवेदन हालिएको हो : कांग्रेस प्रवक्त्ता
2020,19 June, 6:05 am
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विशुद्ध र बिनासर्त आर्थिक सहयोग जोसुकैसँग पनि लिन सकिने र लिइने बताएका छन्।
लकडाउनकैबीच गृहजिल्ला झापा आएका शर्माले एमसीसीका बारेमा बोल्दै सैन्य सहयोग र हस्तक्षेप भने देशका लागि अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे।
'एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता कांग्रेसले गर्‍यो र त्यसलाई भित्र्याउन लागिपरेको भनेर बदनाम गर्न खोजिँदै छ' झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने,'एमसीसी निवेदन हालेर मागेको सहयोग हो, कसैले कुनै स्वार्थका लागि दिएको होइन।'
एमसीसीको प्रक्रिया झलनाथ खनालकै पालामा सुरु भएको भन्दै उनले, यसमा कांग्रेसलाई दोष लगाउनु बेकार भएको बताए।
'राष्ट्रघाती छ भने सहयोग नलिए भैगयो नि किन कांग्रेसलाई दोषारोपण गर्नु?' उनले भने, 'एमसीसीका बारेमा बुँदा बुँदा अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिनु उत्तम हुन्छ, अध्ययन नगरी दोष लगाउनु कसैको बदनाम गर्नु मात्रै हो।'
शर्माले एमसीसी परियोजना सम्झौतामा कहीँ पनि अमेरिकी सेना नेपाल आउने भनेर कतै नलेखिएको दाबी गरे।
उनले एमसीसी परियोजना सम्झौताको राम्ररी अध्ययन गर्न, अनि धारणा बनाउन र प्रतिक्रिया दिन कार्यकर्तालाई अनुरोध गरे।
आफूले परियोजना सम्झौताको धारा र दफादफाको अध्ययन गरेको दाबी गर्दै उनले त्यहाँ उल्लेख भएको बौद्धिक सम्पत्तिको विषयलाई धेरैले भ्रम छर्ने गरेको बताए।
'चीन र भारतले दिएको सहयोग लिन हुने तर अमेरिकाले दिएको सहयोग लिन किन नहुने?' उनले भने।